27 Ụmụ nwaanyị Zelofehad+ nwa Hifa nwa Gilied nwa Mekia bụ́ nwa Manase,+ onye ezinụlọ Manase nwa Josef, wee bịa nso. Ndị a bụ aha ụmụ ya ahụ: Mala, Noa na Họgla na Milka na Teza.+ 2 Ha wee guzo n’ihu Mozis na Elieza onye nchụàjà+ nakwa n’ihu ndị isi na nzukọ ahụ dum n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, sị: 3 “Nna anyị nwụrụ n’ala ịkpa,+ ma o soghị n’òtù Kora+ bụ́ ndị zukọtara megide Jehova, kama ọ nwụrụ n’ihi mmehie nke ya;+ ọ mụtaghịkwa nwa nwoke ọ bụla. 4 Gịnị mere a ga-eji gụpụ aha nna anyị n’ezinụlọ ya maka na ọ mụtaghị nwa nwoke?+ Biko, nye anyị ala n’etiti ụmụnne nna anyị.”+ 5 Mozis wee were okwu ha gaa n’ihu Jehova.+ 6 Jehova wee sị Mozis: 7 “Ihe ụmụ Zelofehad kwuru ziri ezi. Hụ na i nyere ha ala dị ka ihe nketa n’etiti ụmụnne nna ha, ị ga-emekwa ka ihe nketa nna ha laara ha.+ 8 Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel, sị, ‘Ọ bụrụ na nwoke ọ bụla anwụọ n’amụtaghị nwa nwoke, unu ga-eme ka ihe nketa ya laara nwa ya nwaanyị. 9 Ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa nwaanyị, unu ga-enye ụmụnne ya ihe nketa ya. 10 Ọ bụrụkwa na o nweghị ụmụnne, unu ga-enye ụmụnne nna ya ihe nketa ya. 11 Ma ọ bụrụ na nna ya enweghị ụmụnne, unu ga-ewere ihe nketa ya nye onye ya na ya bụ otu ọbara,+ onye kasị bụrụ nwanne ya n’ezinụlọ ya, ọ ga-abụkwa nke ya. Ọ ga-abụrụ ụmụ Izrel ụkpụrụ a ga-eji na-ekpebi ikpe, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu.’” 12 N’ihi ya, Jehova sịrị Mozis: “Gbagoo n’ugwu Abarim+ a, hụrụ ala ahụ m ga-enye ụmụ Izrel.+ 13 Mgbe ị hụrụ ya, ị ga-anwụ dị ka ndị gị nwụrụ,+ ee, gị onwe gị, dị nnọọ ka Erọn nwanne gị nwụrụ,+ 14 ebe ọ bụ na unu nupụrụ isi n’iwu m n’ala ịkpa Zin n’oge ahụ nzukọ a sesara m okwu,+ n’ihe banyere ido m nsọ+ n’akụkụ mmiri ahụ n’ihu ha. Ọ bụ ya bụ mmiri Meriba+ nke dị na Kedesh+ n’ala ịkpa Zin.”+ 15 Mozis wee sị Jehova: 16 “Ka Jehova bụ́ Chineke nke mmụọ+ nke ụdị anụ ahụ́+ niile họpụta nwoke+ ga-abụ onyeisi nzukọ a, 17 bụ́ onye ga na-apụ, na-abata n’ihu ha, onye ga na-edu ha na-apụ, na-edu ha na-abata,+ ka nzukọ Jehova ghara ịdị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha.”+ 18 Jehova wee sị Mozis: “Kpọrọ Jọshụa nwa Nọn, bụ́ onye nwere mmụọ+ dị iche, bikwasị ya aka n’isi;+ 19 meekwa ka o guzo n’ihu Elieza onye nchụàjà nakwa n’ihu nzukọ a dum, ị ga-emekwa ya onye ndú n’ihu ha.+ 20 Ị ga-emekwa ka o nweta ụfọdụ n’ime ebube gị,+ ka nzukọ ụmụ Izrel dum wee na-ege ya ntị.+ 21 Ọ bụkwa n’ihu Elieza onye nchụàjà ka ọ ga na-eguzo, ọ ga na-ajụtara ya ase+ n’ihu Jehova site ná mkpebi ikpe nke Yurim.+ Ọ bụ ya ga na-agwa ha mgbe ha ga na-apụ na mgbe ha ga na-abata, ya na ụmụ Izrel niile na nzukọ ahụ dum.” 22 Mozis wee mee nnọọ dị ka Jehova nyere ya n’iwu. O wee kpọrọ Jọshụa wee mee ka o guzo n’ihu Elieza+ onye nchụàjà nakwa n’ihu nzukọ ahụ dum, 23 o wee bikwasị ya aka ma mee ya onye ndú,+ dị nnọọ ka Jehova kwuru site n’ọnụ Mozis.+